Fahatakarana ny fiakarana heloka bevava any Dubai: Maninona ianao no mila mpisolo vava amin'ny heloka bevava. 0000
Antso momba ny heloka bevava any Dubai
Nasehon'ny antontan'isa izany fahita any amin'ny firenena rehetra ny heloka bevava, ary noho io dia tsy maintsy mizatra amin'ny rafi-pitsarana onenan'izy ireo ny tsirairay avy. Araka ny voalazan'i Statista, ny fijerena ny tahan'ny famonoana olona eraky ny faritra sy ny maha-lahy na maha-vavy dia mampiseho fa manana taha ambony dia avo noho ny salan'isa manerantany i Amerika. Manerana izao tontolo izao, ny lehilahy dia tena iharan'ny famonoana olona noho ny vehivavy.
Ny rafi-pitsarana heloka bevava ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra dia miavaka amin'ny fitsarana hafa manerantany. Raha voaheloka ianao noho ny heloka bevava na miatrika fitsarana eo alohan'ny fitsarana dia azonao atao ny mametraka fitoriana amin'ny taona iray aorian'ny fanamelohana anao na ny fanamelohana anao. Izay olona nomelohin'ny fitsarana Emirà Arabo Mitambatra dia afaka mametraka ny fampakarana azy eo anoloan'ny Fitsarana Cassation (Fitsarana ambaratonga faharoa) izay mety hisian'ny fanamelohana / fanamelohana azy ireo.
Fomba fohy momba ny lalàna momba ny heloka bevava any Dubai
Ny fombafomba amin'ny raharaham-pitsarana heloka bevava any UAE dia napetraka eo ambanin'ny federaly No. 35 amin'ny 1992, araka ny fanitsiana azy. Araka ny andininy faha-7 amin'ny lalàna mifehy ny heloka bevava, ny fampanoavana ampahibemaso dia manana fahefana manokana hanomboka sy hitory ny fizotran'ny heloka bevava mandra-pivoakan'ny didim-pitsarana farany.
Any UAE, ny fampanoavana ampahibemaso dia voampanga amin'ny fahefana manokana hanombohana sy hanenjika ny fizotry ny heloka bevava. Avy eo dia fantatry ny fitsarana ady heloka bevava ny raharaha.
Ny fametrahana vola dia alaina nefa tsy misy mpisolovava. Ilay voampanga notazonina am-ponja vonjimaika dia tsy manana fahafahana mamatotra. Zava-dehibe ny manamarika fa tsy manana rafitry ny mpitsara i UAE, ary eo am-pelatanan'ny Mpitsara ny fiampangana azy.
Dinika fohy momba ny rafi-pitsarana ao Dubai
Ny lalàna Sharia no fototry ny rafitry ny fitsarana heloka bevava ao UAE, izay miorim-paka avy amin'ny Koran sy Sunna.
Ny federasiona dia manana fiandrianana amin'ny raharaha rehetra natokana ho azy mifototra amin'ny rafitra ara-dalàna an'ny Emirà Arabo Mitambatra ambanin'ny lalàm-panorenan'i Emirà Arabo Mitambatra 1971. Ary koa, ny Emirà Arabo Mitambatra dia manana rafitra manadihady momba ny lalànan'ny lalàna sivily izay raisin'ny dabilio matetika.
Etsy ankilany, amin'ny raharaham-pitsarana heloka bevava, ny fenitry ny lalàna iraisana toy ny "porofo tsy azo lavina" dia tsy omena toky.
Rafitra roa no mifehy ny rafitra ara-dalàna an'ny UAE: ny Judiciary federaly dia raisina ho fahefana mpitsara avo indrindra, ary ny sampam-pitsarana eo an-toerana, heverina amin'ny ambaratongam-pahefana eo an-toerana.
Zava-dehibe ny manamarika fa ny fizotran'ny fitsarana any UAE dia miasa amin'ny teny Arabo. Saingy, ny fitsarana dia mety manome mpandika teny amin'ny fitsarana raha ilaina izany.
Fitsarana mpitsara any UAE
Ny rafitry ny fitsarana UAE dia rafitra hierarchy an'ny fitsarana. Ireto ny rafi-pitsarana misy ambaratonga telo:
Ny Fitsarana ambaratonga voalohany
Araka ny voalazan'ny lalàna federaly laharana faha-11 amin'ny taona 1992 izay nasiam-panitsiana, ny fitsarana ny didim-pitsarana voalohany dia azo ihantsiana eo anoloan'ny Fitsarana amin'ny fitsarana ambony ary avy eo ny Fitsarana Cassation.
Topimaso ankapobeny momba ny fizotran'ny raharaha heloka bevava any Dubai
Raha vao misy vaomiera misahana ny heloka dia ilay lasibatra no manao asa ratsy alohan'ny paositry ny polisy nanaovana ilay tena heloka. Raha vantany vao nahavita ny fanambarana sy ny asany ny polisy dia hatolotra ny fampanoavana. Avy eo ny fanenjehana dia manomboka amin'ny federaly na ny fampanoavana eo an-toerana isaky ny emirate.
Fitsarana amin'ny raharaha heloka bevava
Raha vantany vao manameloka didim-pitsarana meloka ny Fitsarana ambaratonga voalohany, dia afaka miakatra fitsarana amin'ny fitsarana ambony ny antoko voaheloka araky ny lalàna mifehy ny heloka bevava UAE. Any Dubai, ny antoko voaheloka ihany no avela hampiakatra fitsarana ambony noho izy. Ny fetran'ny fotoana fampiantsoana dia ao anatin'ny 30 andro manomboka amin'ny fotoana nanamelohan'ny fitsarana ny didim-pitsarany. Ny tsy fanarahana ny fe-potoana voatondro dia hamono na hanafoana ny zon'ny fitsarana ambony.
Fa maninona no ilaina ny mpisolovava?
Zava-dehibe indrindra ny fifidianana izay tokony hisolo tena ny raharaham-pitsaranao. Noho izany dia mila fahaiza-manao mavitrika amin'ny mpisolovava amin'ny Appeal Criminal isika noho ny mampiavaka ny rafitra ara-dalàna ao amin'ny firenena. Satria miankina amin'ny lalànan'ny Sharia ny lalàna mifehy ny heloka bevava any UAE, mitaky fahalalana sy fandikana sahaza avy amin'ny manampahaizana manokana momba ny lalàna izany.
Fitsarana momba ny heloka bevava toro-hevitry ny mpisolovava mikasika ny raharahan'ny antoko voarohirohy iray dia mety hahatratra ny tanjon'ny lalàna.
Zava-dehibe indrindra ny fifidianana izay tokony hisolo tena ny raharaham-pitsaranao.